အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ပန်းသီး: သငျသညျကမ္ဘာ့အမြတ်အများဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာပြီးနောက်ဘာလုပ်?” New York မှာ Rupert သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကရေးသားခဲ့သည်, စနေနေ့ 31 ရက်ဇန်နဝါရီလအပေါ် Observer များအတွက် 2015 15.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တဲ့အခါမှာ Apple က ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသမိုင်းမှာအများဆုံးအမြတ်အစွန်းကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်, လေ့လာသုံးသပ်သူများကခဲသူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆံ့နိုင်.
"ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်", "ထူးချွန်", "နဂါး" ဟုအဆိုပါဆီလီကွန်ချိုင့်ကုမ္ပဏီ $ 18bn လုပ်သောဖြင့်နံပါတ်များအားလေ့လာသုံးသပ် '' တုံ့ပြန်မှုအချို့ကိုခဲ့ကြ (£ 12bn) ရုံသုံးလအတွင်း - ရောင်းချနေသဖြင့် 34,000 ဒီဇင်ဘာလမှအောက်တိုဘာလကနေနာရီဝန်းကျင်အိုင်ဖုန်းတစ်နာရီ. ဒါဟာယခုအခါဘဏ်ထဲမှာ $ 178bn ငွေသားရှိပါတယ်.
သို့သော်ရှိသမျှသောအုန်းအုန်းသဲသဲပြီးနောက်, မေးခွန်းများကိုစတင်. ထက်လျော့နည်းဒေဝါလီ၏ချောက်ကမ်းပါးကနေပြန်လာသောကုမ္ပဏီအတွက် 20 လွန်ခဲ့သော .... နှစ်က, သတငျးကောငျးအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဆက်လက်နိုင်ပါတယ်? ဤတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအောင်မြင်မှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခြောက်ခုကြီးမားတဲ့မေးခွန်းများကိုများမှာ.
Apple ကခဲ့ 90 ဒါပေမဲ့ Apple ကယခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကအံ့သြဖို့ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်သုံးလတစ်ကြိမ်အမြတ်ကြေညာချက်၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးအောင်မြင်မှုမှေးမှိန်စေရန်လေ့ - သူနောက်ပိုင်းတွင်ထင်ရှားအဖြစ်စတိဗ်ဂျော့ဘ် 1997- ထဲမှာပြန်လည်လာသောအခါပယ်ဒေဝါလီမှရက်ပတ်လုံး.
ဒီလေးပုံတပုံရဲ့အမြတ်အစွန်းအခြားစကေးပေါ်မှာ, သော်လည်း. ဒီဇင်ဘာလကုန်ဖို့သုံးလအတွင်းအရောင်းတက်ခဲ့ကြ 30% $ 74.6bn မှ. $ 18bn ၏သူများသည်အကျိုးအမြတ်ကိုတက်ခဲ့ကြ 37%.
ဒါဟာမတ်လကတည်းကအမြန်ဆုံးသုံးလတစ်ကြိမ်ကြီးထွားခဲ့သည် 2012, ထိုအခါမူကား, Apple ကယခုသည်တစ်ဝက်အရွယ်အစားခဲ့သည်. Apple ရဲ့အကြီးအကဲဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်, Lucas Maestri, ကပြောပါတယ်: "သေးငယ်တဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွယ်အစားကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်။ "
Katy Huberty, မော်ဂန်စတန်လေတစ်ဦးသုံးသပ်သူ, ဒါကြောင့်တစ်ဦး "ဟုအဆိုပါစံချိန်စာအုပ်တွေအဘို့အသုံးလပတ်" ဟုဆိုသည်နှင့်မှသူမ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းပစ်မှတ်တိုးမြှင့် $126 သို့ $133, သူမလာမှပိုပြီးကြီးထွားရှိပါတယ်ယုံကြည်သည်ကိုညွှန်း. အဆိုပါရှယ်ယာများ, သောခုန်တက် 5% Apple ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအောက်ပါပြီးနောက်နာရီကုန်သွယ်အတွက်, မှာပိတ်ထား $117 သောကြာနေ့မှာ.
ယခုကြီးတွေစိန်ခေါ်မှု, Geoff Blaber ကပြောပါတယ်, CCS Insight မှသုတေသန၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, လာမည့်တိုးတက်မှုနှုန်းအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်. "အနောက်တိုင်းဥရောပနှင့်မြောက်မျက်နှာကအမေရိကတိုက်ပြည့်ဖြစ်လာကြပြီ: တိုးတက်မှုနှုန်း Apple အတွက်အခန်းရှိသည်ဖို့မှတိုးတက်မှုနှုန်းယူပြီးအပေါ်မှီခိုအားထားရှိပါတယ် [Google ရဲ့] ထုတ်ကုန် based Android ဖုန်း operating system ကို,"သူကပြောပါတယ်. "ဒီကြီးမားတဲ့, ကြီးမားသော, အာရုံတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်နှင့်တစ်ဦးအပြောင်အတိုင်းအတာအထိအိန္ဒိယဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
သွန်မ်ဆင်က Reuters အားဖြင့်တယ်ဆိုတာသိရတယ်သုံးသပ်သူများစက်တင်ဘာလမှယခုနှစ်အတွက် Apple ရဲ့ဝင်ငွေကြီးထွားဖို့ကိုမျှော်လင့် 22%, ဒါပေမယ့်ကြီးထွားဖို့နှေးကွေးရန် 4% နောက်တစ်နှစ်အတွက်.
တစ်ဦးက iPhone လိုခငျြတဲ့သူ left ထိုအရပ်၌များစွာသောပိုပြီးလူဖြစ်ကြ၏?
Apple ကသုံးလပတ်အတွင်းစံချိန်တင် 74.5m မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းချခဲ့, 46% တစျနှစျအစောပိုငျးကာလတူထက်ပိုပြီး. "iPhone အတွက်ဝယ်လိုအားခွားခဲ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားမျှော်လင့် shattering,"အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook ကပြောပါတယ်. "ဒီအသံအတိုးအကျယ်နားမလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ "
အဆိုပါဖုန်းများဟာ Apple ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံသည်အမှတ်, နှင့်ပေါင်းစပ် Microsoft နှင့် Google ရဲ့နောက်ဆုံးသုံးလပတ်ရောင်းအားထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိခဲ့ကြ.
လောကဓာတ်လုံးကိုတစ်ဦး iPhone ကိုလိုလားကဲ့သို့ "ဟန်,"စတီဗင် Milunovich, UBS မှာသုံးသပ်သူတစ်ဦး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှမှတ်စုတွင်ရေးသားခဲ့သည်, စားသုံးသူများ ပို. ပင်ဖုန်းများတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် Apple ကမကြာသေးမီကသည်အထိအစာရှောင်လုံလောက်သူတို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲထွက်ညွှန်ပြ.
သို့သော်, Toni Sacconaghi, Bernstein သုတေသနမှာလေ့လာဆန်းစစ်သူ, Apple ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းခုနစ်လုံးကိုနှစ်အရွယ်ထုတ်ကုန်လိုင်းပေါ်လည်းမှီခိုဖြစ်မည်အကြောင်းသတိပေး. "Apple ကအပေါ်တစ်ဦးကအလောင်းအစားတိုးအိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်လောင်းဖြစ်ပါတယ်,"Sacconaghi ကပြောပါတယ်. "ဒီသတင်းကောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်, အိုင်ဖုန်းကြီးမြတ်. အဆိုပါသတင်းဆိုးသည်, အခုအချိန်မှာကကျော်မောင်းင် 100% ကုမ္ပဏီအများ၏ဝင်ငွေတိုးတက်မှု၏။ "
တစ်ဦးကတရုတ်ဖောက်သည်သစ်နှစ်မျိုး iPhone ကို 6s ဝယ်ယူ. ဓါတ်ပုံ: ဂျိုဟန် Eisele / AFP / Getty Images
အလွန်: iPhone ကိုအရောင်းနိုင်ငံအတွင်းပေါက်ကွဲနေကြတယ်. Apple ကနောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးစမတ်ဖုန်းရောင်းချသူဖြစ်လာမှဒေသခံထုတ်လုပ်သူ Xiaomi ကမှီ. တရုတ်ရောင်းအား, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရပိုကြီးမျက်နှာပြင်ဖုန်းများပြန်လွတ်လာသည်အထိ Apple အတွက်အားနည်းခဲ့သည့်, $ 16.1bn မှာရောက် လာ., ထ 70% ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပေါ် - ကလည်းတရုတ် Mobile ၏ခန့်မှန်းခြေအားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအားတစ်ဦးသဘောတူညီချက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ကြသောအခါ 760 သန်း subscribers.
တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာဝင်ငွေလျင်မြန်စွာကြောင့်ဥရောပတစ်ခုလုံးအတွက်စုဆောင်းငွေပမာဏနှင့်အတူတက်ဖမ်းကြသည်, ရောင်းအား $ 17.2bn ဘယ်မှာရှိ, ထ 20%.
"ကိုယ်အဲဒီမှာရှိနေတယ် [တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ] အောက်တိုဘာလအတွင်းပစ်လွှတ်ပြီးနောက်ညာဘက်, နှင့် iPhone ပတ်လည်စိတ်လှုပ်ရှားမှု6နှင့်6နောက်ထပ် [ခဲ့] လုံးဝအင်မတန်ထူးခြားဆန်းကြယ်,"ကွတ်သုံးသပ်သူများနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းခေါ်နေစဉ်ကပြောပါတယ်. "သင်ကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်သူပါပဲကြောင်းပြောပြနိုင်တယ်။ "
Apple ကပိုမိုတရုတ်နိုင်ငံအတွက်၎င်း၏စတိုးဆိုင်၏အရေအတွက်နှစ်ဆတိုးရန်စီစဉ် 40 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 2016. "ဒါဟာတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးကွက်ကဖွင့်,"ဟုသူကဆိုသည်. "လူတွေက Apple ထုတ်ကုန်ကိုချစ်. အကြှနျုပျတို့ကိုစျေးကွက်အမှုဆောငျဖို့အတတျနိုငျဆုံးသွားနေကြတယ်။ "
ကသာတစ်နှစ်အစောပိုင်းက, အောက်တိုဘာလအတွက် 2013, Apple ကဘယ်သူမျှမကခဲ့6တရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ, Xiaomi ကကပ်တွယ်မှုကို, ဟွာဝေး, Lenovo က, Samsung နှင့် Yulong, သုတေသနကုမ္ပဏီဘက်တော်သားများသည်နှင့်အညီ.
"ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်, given that the average selling price of Apple’s handsets is nearly double those of its nearest competitors,” Canalys says. “While Chinese smartphone vendors are quickly gaining ground internationally, Apple has turned the tables on them in their home market.”
Cook announced that the watch would go on sale in April, giving the companyaboost in its third quarter when it will not benefit from Christmas or the Chinese new year, which will have helped the previous two quarters. “We’re making great progress in the development of it,"ဟုသူကဆိုသည်.
Carolina Milanesi at Kantar Worldpanel ComTech says the watch will help Apple extend its sales intoamuch wider market. “They have been very smart in pushing it as jewellery and design rather than how technologically smart it is," သူမကပြောပါတယ်. “They are concentrating more on impressing the design and fashion world than the tech bloggers.
Tim Cook unveils the Apple Watch in California last year. ဓါတ်ပုံ: Zuma/Rex
Milanesi says Cook has also donealot to make Apple feel likeamore approachable brand. “With Jobs it was aspirational but somewhat untouchable and distant," သူမကပြောပါတယ်. “It seems much more open and accessible under Tim, and that’s important as they want to extend the product range toawide section of consumers.
← ယခင် Post မှ Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဘက်ထရီသေချာသလောက်ကတော့အဆိုပါနေ့ရောက်ခဲ့သည်မည်မဟုတ် →